ငါတကယ်လာမယ့်ကြီးမားသောအရာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်တစ်ပါတ်အဘို့အ 'ယောက်ျားကျွတ်' 'ဝတ်ဆင် - သတင်း
ငါတကယ်လာမယ့်ကြီးမားသောအရာမှန်လျှင်ကြည့်ရှုရန်တစ်ပါတ်များအတွက် '' လူကိုကျွတ် '' ဝတ်ဆင်
Shoreditch နှင့် Seattle ၏လမ်းများပေါ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး flannel-shirt ကိုကော်ဖီညှပ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ယောက်ျားသည် Bun သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆံပင်ပုံစံဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2016, သို့သော်, တွားတတ်သောသူ၏နှစ်ဖြစ်၏။
သူတို့ကကလစ် -pro မျိုးကွဲများရောင်းစတင်ကတည်းကအစဉ်အဆက်ကကျနော်တို့အထွတ်အထိပ်လူသား Bun ရောက်ရှိင့်ကြောင်းသိသာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာဖြစ်သည်။
ဒါဟာလေးနက်သောစွမ်းဆောင်ဆွဲရရှိမှုရဲ့: Justin Bieber နှင့် Harry Styles နှစ် ဦး စလုံးသူတို့ကိုဝတ်ထားပြောက်ခဲ့ကြ, VICE ကလူ Bun မှဝိညာဉ်ရေးရာအစ်ကိုကခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လကကြေးနန်းကြေငြာခဲ့သည်: ထိုလူသည် Bun သေပြီ, လူသည်ကျစ်သောသူသည်အသက်ရှင်ပါ!
ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာပုံမှန်ယောက်ျားတွေထားခဲ့သလဲ On-trend ကို celebutantes ရှုပ်ထွေးကျစ်ကျစ်သူတို့ရဲ့ဆံပင်နှင့်အတူလှည့်ပတ် flounce များအတွက်အားလုံးကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်လမ်းပေါ်ရှိလူကော? ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ကျက်စားသောလူတစ် ဦး ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုခေတ်မှီပုံပေါက်စေလိမ့်မည်လားဆိုတာစမ်းစစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်တနင်္လာနေ့မနက်မှာငါ့စားပွဲပေါ်မှာထိုင်နေတာ၊ ငါ့ဆံပင်တွေကိုညှပ်ပြီးညှပ်ထားတယ်၊ ပြီးတော့စေ့စပ်သေချာစွာထိုးသွင်းပြီးပက်ဖြန်းလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအိမ်သာအိမ်သာများ၏ 'မှန်ဘီလူးတွင်ပြုလုပ်ထားသောလက်ရာများ' ကို ၀ န်ခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမမုန်းကြောင်း ၀ န်ခံခဲ့သည် - Vo5 Extreme စတိုင် Matt Clay ၏လက်သီးဆုပ်ခြင်းဖြင့်မရရှိနိုင်ပါ။
ကျန်တဲ့လူတိုင်းသာအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်နေ့လည်စာစားတဲ့အခါငါကြည့်လိုက်တာကပြည်သူလူထုကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာကိုနေ့လည်စာစားချိန်မှာစတင်သတိပြုမိလာတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကတုန်ခါမှုကိုကျွန်တော်ခံရပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လမ်းသွားလမ်းလာတွေဘက်ကကြည့်ရတာခက်တယ်။ လူသည် Bun ၏ဂုဏ်အသရေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြမ်းတမ်းသောအရာတစ်ခုခုရှိသည့်အနေဖြင့် - သင်သည်သင်၏ဆံပင်ကိုချည်ထားသည့်အလားသင်သစ်သားခုတ်စဉ်သင်၏မျက်လုံးများမှထွက်ခွာသွားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျူပင်၏ယောက်ျား၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်ဆံပင်ကိုအမည်းရောင်ချည်ထားသည့်ရှံဆုန်အရေးအခင်းတွင်ပိုမိုချောမွေ့စေသည်။
အလုပ်ပြီးနောက်ငါညစာစားရန်မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်, ငါ့ယောက်ျားသည်ရဲရင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ငါ၏အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ငါသူတို့ကိုမပြောဘဲထပေါ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါမျှော်လင့်နေသောသွေးထွက်သံယိုငရဲသည်သင်၏ခေါင်းပေါ်မှာဘာလဲဆိုတာမှကျေနပ်လောက်သောအဖြေကိုပေးသောအခါ?, ငါ့အမိညနေပိုင်းကျန်ကြွင်းသောငါ့အဘို့စားပွဲထိုးမှတောင်းပန်ဖြုန်းဖို့ဆက်လက်။
ပထမနေ့တွင် Telegraph မှစံသတ်မှတ်ထားသည့်အမျိုးသားကျစ်ခြင်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သွားခဲ့ပြီ၊ ၀ တ်ဆင်သူသည်မိမိဆံပင်အားလုံးကိုဆွဲယူကာသူ့ခေါင်းကိုသပ်ရပ်စွာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထိုးနှက်ထားသည်။ ဖြစ်ကောင်းအချက်ဖြစ်သည့် - - ဒါဟာအတော်လေးသိမ်မွေ့ခံစားခဲ့ရဖူးပေမယ့်ပရိယာယ်ဒီနေရာမှာဂိမ်း၏နာမကိုမဟုတ်ခဲ့: ငါကျစ်လစ်သောသူသည်ပွေ့ဖက်သွားခဲ့ကြသည်လျှင်ငါဂုဏ်ယူစွာပြုသွားခဲ့သည်။ နှစ်ရက်တွင်ကျစ်ကျစ်သုံးခုကိုသွားခဲ့သည်။
ငါဘယ်လိုမိုက်မဲတာလဲ အလွန်ကထွက်လှည့်။ ပြောင်းဖူးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို Lemar နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့တာ၏အများစုကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏လက်များကိုညှစ်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီအတွက် Iggy Azaelia သာရရှိမည့်ငရဲအထူးစက်ဝိုင်းသို့သွားမည်လောဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းမှာငါအားကစားခန်းမကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါလမ်းလျှောက်စဉ်ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာအရှိန်ပြင်းစွာလှုပ်ရှားနေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အဆိပ်အတောက်များကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အင်္ကျီတစ်ဖက်တွင်ဖြူဖပ်ဖြူရောကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူတို့မြင်သောအခါမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်သည်။ ငါသည်ငါ့ကဒ်ကိုမေ့လျော့ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ကြိုးစားငါ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူချင်ပါတယ်သိသောကြောင့်, ရှေ့စားပွဲခုံမှာအစားထိုးယဉ်ကျေးစွာငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ငါတကယ်ကိုအတွင်းမှာရှိတဲ့အခါ, ငါစာရေးကိရိယာစက်ဘီးပေါ်တွင်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးများနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ကျော် scampering မတိုင်မီအလေးအပိုင်းအတွက်ငါးမိနစ်သာကြာခဲ့သည်။ အဲဒါကကူညီတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာလစ်သူယေးနီးယားအမျိုးသမီးရပ်ဘီအသင်းရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်လိုပဲ။ ငါအရမ်းလက်ချောင်းတစ်ချောင်းနှင့်တူထွက်မှီဝဲ။
ငါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ရောမတို့၏ကျည်ဆန်နှင့်ရောစပ်လိုက်သည်။ နာမည်ကြီးကြားရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်ုပ်ကိုချစ်စရာကောင်းသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ဆံပင်ရှည်ရှိမိန်းကလေးများကိုအသစ်တွေ့ရှိထားသောလေးစားမှုကိုကျွန်တော်စတင်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆုံးမဲ့ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်စွာကြည့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ နေရာတစ်လျှောက်လုံးမှခုန်ထွက်နေသောသောင်တင်များကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဘ ၀ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ငါကဒါကြောင့် fluffy မကြည့်မယ်လို့ဒါကြောင့်လုံးဝဆေးကြောရပ်တန့်ချင်ပါတယ်။
သို့သော်ကြာသပတေးနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝကိုကြိုးဝိုင်းသောလူထဲသို့အပြည့်အ ၀ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းသို့အသွားလမ်း၌တွေ့ရသောစိတ်ရှုပ်ထွေးသောအမြင်များမှကျွန်ုပ်အားအစွမ်းခွန်အားခံစားလာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အသွင်အပြင်သစ်ကိုအခြားသူများကအသုံးမပြုခဲ့ကြပါ - ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်ထိုနေ့လည်ခင်းတွင်တွေ့ဆုံရန်ထိုင်သောအခါသူသည်သူ့မျက်လုံးများကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသောလက်ကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်နှင့်စာသားကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်သည်။ ငါ့ဆံပင်နဲ့ငါ့မျက်နှာနောက်ကိုသူသူကအကြောင်းမေးသင့်ပါတယ်ရှိမရှိ။ သူမကျင့်။
နောက်ဆုံးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်လာပြီးငါတကယ်လူမိန်းမနဲ့ညစာသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ငါထပ်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသတင်းမှားခဲ့င်ထွက်လှည့်: သူမငါကြည့်ရှုမယ့်ပုံပြင်မိုက်မဲအကြောင်းကိုသူမ၏နှင့်ငါတို့ညစာစားလိမ့်မယ်တည်ထောင်ခြင်း၏ classiness အကြောင်းကိုငါ့ကို။ ငါတို့စားပွဲသို့ငါတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဆိုဖီအမည်ကိုသူ၏စာရင်းထဲမှဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်မျှော်လင့်နေသည်ဟုထင်သည်။
ပြီးတော့မင်းဘာသိလဲ ငါတောင်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သီတင်းပတ်အစပိုင်းတွင်တစ်စုံတစ်ရာသောအသံဖြင့်မျိုမိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ရှက်ခြင်းနှင့်အနီရောင်နီရဲလိမ့်မည်။ ငါမူကားသောကြာနေ့ရောက်သောအခါအရှက်ကွဲခြင်းကိုလေတိုက်ရာသို့လုံးလုံးလွှင့်ပစ်လိမ့်မည်။ အရမ်းညစ်ပတ်တဲ့ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူကြွလာသောစိတ်ဓာတ် fuck ဆိုတဲ့။ အဆိုပါကျစ်၏ plaiting သို့သွားစောင့်ရှောက်မှုပမာဏငါ့ကိုအခြားအရာအားလုံးအကြောင်းကိုဂရုစိုက်ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းကိုပေးသောကဲ့သို့ဖြစ်၏။
အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်မနေ့လည်စာစားချိန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အလွ fuck ဆိုတဲ့ကြည့်ရှုသကဲ့သို့, အခြားလူများထင်သောအရာကိုဂရုမစိုက်မဟုတ် - ဒီတစ်ခါလည်းဒီလူကိုကျစ်အကြောင်းကိုအကြောင်းပါ။ ငါသည်ငါ့လက်၌အဖြူပြားကိုငုံ့ကြည့်, ငါကနေဝယ်ချင်ပါတယ်စျေးအလွန်စျေးကြီး Shoreditch လမ်းပေါ်မှာ back up, ငါအခြားအရာတစ်ခုခုကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဤသည်လူကို Bun စတင်ခဲ့ပုံကို: အချည်လွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြmyselfနာရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ခံစားမိနိုင်တယ်။